အလှအပ ကို ဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ ဝက်ခြံတွေ ကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ? | OnDoctor
အလှအပ ကို ဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ ဝက်ခြံတွေ ကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ?
By OnDoctor Editor	 On Aug 12, 2018 Last updated Aug 25, 2020
အလှအပကို မြတ်နိုးလာတတ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် လောက်ကစပြီး မျက်နှာ နဲ့ ချွေးထွက်များတဲ့ နေရာတွေမှာ ဝက်ခြံပေါက်တတ်တဲ့ ပြဿနာတွေ စဖြစ်လာတယ်။
ရိုးရိုးဝက်ခြံပေါက်တဲ့ အခါ သိပ်ပြီးတော့ စိတ်မညစ် ရသေးပေမဲ့ ဝက်ခြံတွေက ရောင်ရမ်းပြီး အမာရွတ်တွေ ကျန်ခဲ့တဲ့အခါ ဒုက္ခရောက်ရတော့တယ်။ အထူးသဖြင့် လူအများ မြင်လွယ်တဲ့ မျက်နှာလို နေရာမျိုးမှာ ကျန်ခဲ့တာဆိုရင် အပြင်ထွက်တာနဲ့ ဒီအမာရွတ်တွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ အထိ မိတ်ကပ်လိမ်းရတာ အစ အချိန်ပိုယူလာပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့တော့ ဒီလိုမျိုး အလှအပကို ဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ ဝက်ခြံတွေ အကြောင်း နဲ့ သူတို့မဖြစ်အောင် ကာကွယ် လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းလေး တစ်ချို့ကို ပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်။
ဝက်ခြံ ပေါက်တဲ့ ပြဿနာဟာ အပျိုဖော် လူပျိုဖော် စဝင်တဲ့ မိန်းကလေး ယောင်္ကျားလေး အသက်အရွယ်တွေမှာ စဖြစ်ပြီး အသက် ၂၀ နဲ့ ၂၅ လောက် ရောက်တဲ့ အခါမှာ ဝက်ခြံပေါက်တာဟာ တဖြည်းဖြည်းနည်းသွားပါတယ်။ စားသောက်နေထိုင်တဲ့ ပုံစံပေါ် လိုက်ပြီး တစ်ချို့သော သူတွေမှာတော့ အသက် ၃၀ ကျော် အထိပါ ဝက်ခြ ံဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဝက်ခြံ ဖြစ်ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း ကတော့ အဆီပြန်တာ များတာကြောင့် ပဲဖြစ်တယ်။ ဝက်ခြံတွေ ဘာကြောင့် အပျိုဖော်ဝင်စမှာ စဖြစ်ရတာလဲ လို့မေးရင် ခန္ဓာကိုယ်က ဇီဝဖြစ်စဉ် အတော်များများကို ထိန်းချုပ်ရာမှာ ပါဝင်တဲ့ မျိုးပွားဟော်မုန်းတွေဟာ အပျိုဖော်ဝင်စမှာ ကိုယ်တွင်းမှာ စတင်များလာလို့ လို့ဆိုရမှာပါပဲ။
ဟော်မုန်း ဓာတ်တွေဟာ အရေပြားမှာ အဆီဓာတ်ထွက်တာ နည်းတာ များတာတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ Androgen နဲ့ Progestogens ဟော်မုန်းတွေဟာ အရေပြားမှာ အဆီထွက်ခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး မဟော်မုန်း လို့ ဆိုနိုင်တဲ့ Oestrogen ဟော်မုန်းကတော့ အဆီထွက်တာကို လျော့ချပေးပါတယ်။
နောက်အကြောင်းရင်း တစ်ခုကတော့ အဆီဓာတ် ထွက်တဲ့ ချွေးဂလင်းတွေမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ဖွားတာကြောင့် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယား ပေါက်ဖွားမှုကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ဝက်ခြံတွေဟာ ရောင်ရမ်းနေတတ်ပါတယ်။ ရောင်ရမ်းတဲ့ ဝက်ခြံတွေဟာလည်း အမာရွတ်ကို ပိုမို ဖြစ်စေပါတယ်။
မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေကို သန့်ရှင်းရေး ပုံမှန်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အခါမှာ ဒီလို ဘက်တီးရီးယား ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဝက်ခြံမျိုး ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဝက်ခြံတွေ ရဲ့ လက္ခဏာ
ဝက်ခြံပေါက်တဲ့ အခါမှာ မျက်နှာပေါ်မှာသာ မကဘဲ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်း ချွေးထွက်များတဲ့ နေရာတွေမှာပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ချွေးပေါက်မှာ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို တစ်ခါတစ်ရံ blackheads အနေနဲ့ မြင်ရတတ်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ဝက်ခြံပေါက်တဲ့ အရေပြားအနီးနား တစ်ဝိုက်မှာ ရောင်ရမ်းနေတာတွေကို လည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ချွေးပေါက်မှာ ရှိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို ဝက်ခြံတွေကို မသန့်ရှင်းတဲ့ လက်တွေနဲ့ သွားကိုင်လိုက်မိရာက ဖြစ်သွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဖျားတာ နဲ့ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတဲ့ လက္ခဏာတွေဟာ ဝက်ခြံ အပြင်းအထန် ပေါက်တဲ့ အခါမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို မျိုးအထိ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဆရာဝန်ကို သွားပြသင့်ပါတယ်။
၁) အဆီဓာတ် ထွက်တာ များတယ်လို့ ခံစားရရင်တော့ အဆီဓာတ်ကို လျော့ချပေးမယ့် အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို စမ်းသုံးကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တန်ဆေး လွန်ဘေး ဆိုတဲ့ အတိုင်း ချင့်ချိန် သုံးဖို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ အသားအရေ ခြောက်သွေ့ပြီး တခြား အရေပြား ပြဿနာတစ်ခု ထပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၂) မျက်နှာ ကို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်လောက် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးမှသာ ချွေးပေါက်မှာ ပိတ်ဆို့နေတဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက မသန့်ရှင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုရင် လက်ကိုလည်း ဂရုတစိုက် ဆေးပေးနေရပါမယ်။
မသန့်ရှင်းတဲ့ လက်တွေနဲ့ မျက်နှာကို မကြာခဏ ကိုင်မိတဲ့ အခါ ဝက်ခြံတွေ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အတွက်ပါပဲ။
Author : Dr. ေမွှး
လိင်အင်္ဂါသန့်ရှင်းရေး အထူးအလေးထား ဆောင်ရွက်ပေး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အမျိုးသားနှင့် အတူနေရန် သင့်/မသင့်
ရေနွေးငွေ့သုံးပြီး မျက်နှာ အလှအပကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းကြမလဲ
အသားအရေ ကို လှပစေဖို့ ကူညီပေးမဲ့ သဘာဝပစ္စည်းများ
အိပ်ရေး မဝတဲ့ အခါမှာ အလှအပပေါ် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှု တွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ?
အလှအပကိုပျက်စေတဲ့အမာရွတ် ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ ဘယ်လိုကုမလဲ
အိပ်ရေး မဝတဲ့ အခါမှာ အလှအပပေါ် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှု တွေ…